Wararka | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Bulsho / Wararka
Halkan waxaad ka heli kartaa xiriiryada wararka oo ku qoran iswiidhish fudud, iyo wararka iswiidhishka oo ku turjuban luqado kale. Waxaad xitaa akhrin kartaa wararki ugu dambeeyay ee dhinaca Idaacada Iswiidhan.
Idaacadaha Raadiyowga qaranka Iswiidhan
​​​​​​Meeshan baa waxa ka heleysaa idaacadiihii ugu dambeyay Raadiyowga qaranka Iswiidhan. Hadii oo luqadaada hooyo lagu heleyn waxa isticmaaleynaa kan iswiidhishka.
Tuuji qoralka idaacada sidaa idaacada ugu akhrisatid bogga internetka Raadiyowga qaranka Iswiidhan. Isku xiriiriyahay wuxu furi daaqad kale
Hultqvist: Mareeykanku wuxuu ballaan qaaday difaacayaga
Thu, 19 May 2022 15:56:00 GMT+2
Wasiirka difaaca Iswiidhen Peter Hultqvist ayaa booqasho ku jooga Washington DC isagoo halkaas kula kulmay dhiggiisa Lloyd Austin. Waxyaabihii labada wasiir ay ka wada hadleen waxa ka mid ahaa dalabka codsiga ku biiridda Nato ee Sweden iyo diidmada Turkiga iyo sharuudaheeda cusub."Arrintaan waxaan u maraynaa dhinaca wadahadalka, rajo fiican ayaanan ka qabaa in xal loo heli doono". sida uu wasiirku sheegay.
Booliska Iswiidhen ayaa qabtey xashiishad iyo daroogo farobadan sanadkii tegey
Thu, 19 May 2022 15:07:00 GMT+2
Booliska Iswiidehn ayaa qabtey xashiishad iyo daroogo farobadan sannadkii tegey.Sannadkii la soo dhaafey ee 2021 ayaa boliisku gacanta ku dhigey 2.3 tan oo xashiish ah halka sanadkii 2020 la qabtey 1.4 tan sida ay sheegtay Xarunta baarista caddeeymaha qaranka ee NFCMaria Lindstam oo ka tirsan NFC ayaa sheegtey in weli loo baaahanyahay in wax laga qabto dambiyada la xiriira daroogada.
Fikir xeereed cusub oo halis ku ah ammaanka sharciga lagu qabo
Thu, 19 May 2022 15:04:00 GMT+2
Dowladda Iswiidhen ayaa soo jeedisay in khasnada caymisku ay go'aamiso soo celinta lacagaha loo arko in qalad lagu bixiyey.Talo soo jeedintaan ayuu maanta ka doodayaa guddi-hoosaadka baarlamanka ee arrimmaha bulshada sida aan warka ku helney.Arrinka soo celinta lacagta si khaldan lagu bixiyey ayaa horey waxaa u go'aamin jiray maxkamada degmada oo shakhsigana laga caawin jirey garyaqaan u dooda.
Codsigii ku biirista Naato ayey maanta gudbiyeen waddammada Iswiidhen iyo Finland
Arbacada maanta ayaa nootay maalin taariikhi ah, kadib markii ey codsigoodii ku biirista Naato gudbiyeen dalalka Iswiidhen iyo Finland.Xoghaya Guud ee Naato oo goobta ka hadlay ayaa dhacdadaan ku tilmaamay mid taariikhi ah.Hase yeeshee aan sidii degdegga ahayd ee la filayey loogu biiri doonin, maadaama uu aarinkaa sheegay inuu ka soo horjeedo maamulka dalka Turkiga oo xubin ka ah Naato.
Swish cusub oo been abuur ah oo lagu arkey nawaaxiga Göteborg
Wed, 18 May 2022 15:35:00 GMT+2
Noocan cusub oo swish ah ayaa ah App qayaano leh kaas oo dhawaan ka soo muuqday agagaarka Göteborg iyo meelo kale oo dalka ka mid ah.Dadka ay saameysay xatooyada nuucan ah waxaa ka mid ah Joakim Folmer oo dukaan cunto ku leh degmada Lerum.Swishkan qiyaanada ah ayaa aad ugu eg Swish-ka caadiga ah
Mustaqbal adag oo soofoodsaaraya ganaciga yar yar
Wed, 18 May 2022 13:53:00 GMT+2
Ururka ganacsiga Iswiidhen ayaa saadaalinaaya mustaqbal adag inuu soofoodsaari doono, ganaciga tafaariiqda ahka dib cudurkii covidka, iyo dagaaladii ka dhacay dalka Ukreyn ayaa , madaxa ururka qanacsiga, Sofia Larsen ayaa sheegtey in fursadaha shaqada ee ganacsiga laga yaabo inuu yaraado, Ururuka ganacsiga Iswiidhan ayaa aaminsan in sicir bararka sareeyo.,dhibaatooyinka sahayda. Heerarka dulsaarka sare ay horseedi doontaa in dhaqaalha qooysasku hoos u dhaco
Iswiidhen iyo Finland oo codsiyadooda ku biirista Naato gudbin doona berrito
Codsiga ka mid noqoshada Nato oo ay saxiixday Ann Linde ayaa safiirka Sweden ee Nato waxa uu berri u gudbin doonaa xoghaya guud ee Gaashaanbuurta Nato.Arrintaa ayaa dhici doonta isla wakhtiga Finland ay iyaduna gudbin doonto codsigeeda ka mid noqoshada Nato.58% ayaa sidoo kale baaris ay sameeysay Novus lagu sheegay in bulshada Iswiidhen taageersan tihiin tallaabadaa. 23% diiddan yihiin, 19%-na aaney go'aan ka gaarin.
Tirada qaadata lacagta ceyrta oo yaraatey degmada Markaryd
Tue, 17 May 2022 15:39:00 GMT+2
Waxaa degmada Markarys isa soo taraya dad badan oo ka baxay ceyrta una guuraya isku filnaansho.Degmadu waxay hoos u dhigtay kharashkii ay ku bixin jirtay ceyrta saddex meelood laba sanadii 2017Eman Hajjo "Aad bay u adag tahay in aad ku noolaato lacagta cayreta, waa inaad shaqeysaa si aad xor u noqoto oo aad adigu go'aansato oo aad wax walba qabsan karto,"
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo ka hor yimid ku biriidda Iswiidhen iyo Finland ee Naato
Turkiga ayaa ku eedeeyay Iswiidhen iyo Finland in ay gabbaad siiyaan ururro argagaxis.Turkigu markii uu galay waqooyiga Suuriya si uu ula dagaalo Kurdida Suuriya, ayey Iswiidhen iyo Finland ku soo rogeen cunaqabatayn hubka ah."Waxaan aaminsanahay in ugu dambayn lagu guulaysan doono ku biirista", sida uu sheegay Robert Dalsjö oo ah cilmibaare sare ka tirsan machadka cilmibaarista ee difaaca.
Qiimaha dharka la kala siisto ayaa kordhi kara 15-20 boqolkiiba dayrta
Tue, 17 May 2022 14:11:00 GMT+2
Qiimaha suufka ayaa gaaray heerkii ugu sareeyey , sida ey sheegeen shirkadaha ka ganacsada dharka.Charlotte Nordén oo ka tirsan ururka ganacsiga Iswiidhen ayaa sheegtay in laga soo bilaabo bishii sebtembar ee 2021 ilaa hadda uu qiimiha suufku kor u kacay 40%.Cimilada oo xun ayaa sababtey in qiimaha suufku sare u kaco, sidoo kale sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka iyo tamarta.
Iswiidhen oo dalbanaysa ku biirista gaashaanbuurta Naato
Wed, 18 May 2022 16:19:00 GMT+2
Kulan maanta ka dhacay aqalka baarlammaanka ayey xisbiyada ku jira waxay uga doodeen su’aasha la xiriirta codsiga ku biirista gaashaanbuurta Naato. Xisbiyada badankood lix xisbi ayaa taageerey tallaabadaa, waxaase ka hor yimid xisbiyada Väsnterpartiet iyo Miljöpartiet.Halka uu hoggaanka xisbiga SD go'aan ku gaaray in Naato lagu biiro mar haddii Finland tallaabadaasi go'aansatay.
Xisbiga S oo go'aan ku gaaray ku biirista gaashaanbuurta Naato
Xisbiga socialdemokraterna ayaa ku dhawaaqay in ay oggol yihiin ka mid noqshada Sweden ee Nato.Sida ay axaddii shalay sheegtay ra’iisulwasaaraha Iswiidhen Magdalena Andersson."Waa arrin loo baahan yahay in lala jaanqaado xaaladda Yurub", sida ay sheegtay Andersson.
Koox ka socota dalka Ukraine oo ku guuulaysatay tartankii heesaha ee Eurovision
Mon, 16 May 2022 14:04:00 GMT+2
Kooxda Kalush Orchestra ee reer Ukraine ayaa ku guuleystay tartankiin heesaha Eurovision Song ContestMadaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa u hambalyeeyay kooxda reer Ukreyn ee bandhiga ku guuleysatey.Cornelia Jakobs oo ka socotey Iswiidhen ayaa geshey kaalinta 4aad.
Tallaal covid-ka oo cusub ayaa la soo saarayaa qaaradda Yurub dayrta sannadkan
Mon, 16 May 2022 13:59:00 GMT+2
Tallaal cusub ee covid-ka oo la, cusboonaysiiyay ayaa la filayaa in laga helo Yurub dayrtan, taas oo macnaheedu yahay in qaybo badan oo kaydka tallaalka hadda jira laga yaabo in la’ qubo.Midowga Yurub iyo Iswiidhan waxay iibsadeen tallaallo aan shaqaynayn markii uu cudurku hoos u dhacay gu'gii. Richard Bergsröm ayaa u sheegay SVT inuu aaminsan yahay in Sweden ay u baahan doonto inay iska tuurto malaayiin talaal ah.
Wadahadalladii xisbiyada ee Naato oo la soo bandhigey
Tue, 17 May 2022 13:46:00 GMT+2
Maanta ayaa la soo bandhigey go'aankii wadahadallada xisbiyada ee ka xaajoodkii ku biirista Naato.Xisbiga Socialdemokraterna ayaa isaguna fikirkiisa ka dhiiban doona maalinta axadda ee foodda innagu soo haysa."Mowqif waan ka haysannaa, laakiin waxaan sheegi doonnaa markuu xisbigu go'aankiisa guud gaaro", sida ay sheegeen wasiirrada difaaca iyo arrimmaha dibaddu.
Ajendeyaasha howlwadeennada caafimaadka oo noqoneya midda ugu muhiimsan doorashada sannadka
Fri, 13 May 2022 13:42:00 GMT+2
Arrinka shaqaalaha daryeelka cafimaad ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee ay musharixiinta ugu sarreeysa xisbiyada gobolladu ay mudnaanta siiyaan.176 musharax ayaa ka jawaabay daraasad sahan oo ay sameeysay laanta wararka Ekot."75% oo siyaasiyiintaa ka mid ah ayaa doortay arrinka shaqaalaha daryeelka caafimaad", sida ay sheegtay Lena Lyckdal, oo ah kalkaalisada daryeelka degdegga ah ee Borås
Xisbiga KD oo ka noqday go'aankiisii
Thu, 12 May 2022 14:29:00 GMT+2
Xoghaya xisbiga Krisdemokraterna Peter Kullgren ayaa waraysi ay laanta wararka Ekot la yeelatay wuxuu ku sheegay in ay sii wadi doonaan waraysiyadii ay kula heshiiyeen Sveriges radio.Arrinkan ayaa ka dambeeyay kulan howlwadeennada hoggaanka sare ee idaacadda iyo KD wada yeesheen.”Waxaan helnay kulankii aan dalbannay, saas darteed qiimayntaydu waxay tahay in aan fulin doonno waraysiyadii aan hore u ballan qaadnay", sida uu sheegay xoghaya xisbigu.
Shaqo la'aanta oo sii yaraaneysa
Thu, 12 May 2022 13:30:00 GMT+2
Shaqo la’ aanta ka jirta Iswiidhen oo sii yaraaneysa guud ahaan.Degmada shaqo la'aanta ugu badan ka haysata dadka ka soo jeeda dalka dibaddiisa ayaa ah degmada Säffle oo 36,5 boqolkiiba shaqo la’aantu gaartey bishii Maarso.Natasha Bank ayaa tiri: "ujeeddada fog ee mashurucani waxay tahay iney bartaan luqadda iswiidhishka, iyo xeerarka bulshada iyo sida looga shaqeyo Iswiidhen.
Hoggaanka ciidanka boliiska iyo rabshadihii dhacay fasaxyadii ciidul-fusxiga
Thu, 19 May 2022 16:09:00 GMT+2
Laanta wararka Ekot ayaa daboolka ka qaadday in qaybta sirdoonka ee boolisku ay bishii feebaraayaba ka digtay dhicitaanka qalalaaso lug ku leh ololaha siyaasiga xagjirka ee Rasmus Paludan.Hase yeeshee aanu ciidanka ammaanku u diyaargaroobin. Warbixintu waxay sheegtay in xaafadda Skäggetorp ee Linköping iyo xaafadda Navesta ee Norrköping ay ahaayeen goobo ay ka jireen kooxo doonaya in ay qas abuuraan.
Nin 33 jir ah ayaa loo haystaa in uu geystey 24kiis kufsi ah
Wed, 11 May 2022 16:04:00 GMT+2
Nin 33 ah ayaa lagu soo oogay 24 kiis oo kufsi ah, oo ka dhacay guri dadka da’da ah lagu xannaaneyo ku yaal galbeedka Iswiidhen, halkaas oo uu ka shaqayn jiray.Ninkan ayaa afar dumar ah dembigan kufisga ah kula kacay , kuwaas oo sidoo kale la sheegay in ninkaasi uu duubay.Arrintan oo dhan ayaa la ogaaday kadib markii ay booliisku sameeyeen baaritaan guri, halkaas oo ay ka heleen muuqaalo muujinaya tacadiga uu gestey, inkastoo oo ninkani iska dheereeyay tuhunkan.
​Qoraal cad - Warka oo ku qoran iswiidhish fudud Raadiyaha Iswiidhan oo ku baxa iswiidhish fudud - Warar ka yimid raadiya iswiidhan loogu tala galay adiga ku cusub iswiidhan Warka telefishinka SVT oo ku baxa iswiidhish fudud - Warka oo ku qoran iswiidhish fudud kana yimid SVT. Waxey ku bexeysaa sidoo kale soomaali, iyo qoraal iniriisi ah. 8sidor.se - Bogga 8 waxaad wararka ku akhrisan kartaa, kuna dhegeysan kartaa swiidhish fudud.
Wararka Iswiidhishka ee luqado kale
The Local, ingiriisi ah Radio Sweden, ingiriis ah Radio Sweden, luqadda carabiga ah Radio Sweden, luqada beershiga ah Radio Sweden, soomaali ah Raadiyaha Iswiidhan ee luqada kurdiga
Idaacadii oo ah luqada dhagoolayaasha
Idaacada luqada dhagoolka - Idaacadii oo ku baxeyso luqada dhagoolka bogga internetka telefishinka qaranka iswiidhan